ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာတဲ့ ရင်သွေးလေးကြောင့် ဝမ်းသာပီတိမဆုံးဖြစ်နေရှာတဲ့ သူထူးစံ တို့ဇနီးမောင်နှံ…. – Cele Oscar
ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာတဲ့ ရင်သွေးလေးကြောင့် ဝမ်းသာပီတိမဆုံးဖြစ်နေရှာတဲ့ သူထူးစံ တို့ဇနီးမောင်နှံ….
April 3, 2022 By L YC News
ပရိသတျကွီးရေ တဈခြိနျက video ဇာတျကားလေးတှကေနေ ပရိသတျအားပေးမှုတှေ ရရှိထားတာကတော့ သူထူးစံ ပဲဖွဈပါတယျ။ သူကတော့နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတဈယောကျ ဖွဈပွီး ပရိသတျ အခဈြတျောတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ အကယျဒမီဆုရရှိပွီးနောကျပိုငျး အနုပညာ အလုပျတှေ နဲ့ ဝေးကှာနခေဲ့တာပါ။
ဒါပမေယျ့လညျးလူမှုကှနျရကျကနေ ပုံရိပျလေးတှကေို တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ အနုပညာ အလုပျတှကေိုနားပွီး ပြျောရှငျစရာမိသားစုဘဝလေးကိုတညျဆောကျထားတာပါ။ ခုမှာတော့သူတို့မိသားစုဘဝလေးဟာ ပိုပွီး ပြျောရှငျစရာကောငျးနခေဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့သူတို့ မိသားစုဘဝလေးကို ရငျသှေးလေး ရောကျရှိလို့လာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။သူရဲ့ရငျသှေးလေးကို တှတှေ့ခေ့ငျြးမှာပဲ သူဟာပြျောရှငျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သားလေးလားသမီးလေးလား ဆိုတာလညျးပရိသတျတှသေိခငျြနတောဖွဈပွီးပရိသတျတှခေနျ့မှနျးပေးသှားကွပါဦးနျော။
Crd; Cele Diary
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ချိန်က video ဇာတ်ကားလေးတွေကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ ရရှိထားတာကတော့ သူထူးစံ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် အချစ်တော်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုရရှိပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာ အလုပ်တွေ နဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အနုပညာ အလုပ်တွေကိုနားပြီး ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ခုမှာတော့သူတို့မိသားစုဘဝလေးဟာ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ မိသားစုဘဝလေးကို ရင်သွေးလေး ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ရင်သွေးလေးကို တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲ သူဟာပျော်ရွှင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သားလေးလားသမီးလေးလား ဆိုတာလည်းပရိသတ်တွေသိချင်နေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေခန့်မှန်းပေးသွားကြပါဦးနော်။
Crd; Cele Diar
ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး ရတဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…..
ပရိတ်သတ်တွေ နောက်ထက်စိတ်ဝင်စားစေမယ့် ရေခဲမုန့်ဆိုင်ကြော်ငြာလေးရိုက်ကူးနေတဲ့ မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန်……